ओमानसँग नेपाल ५ विकेटले पराजित ! « MNTVONLINE.COM
ओमानसँग नेपाल ५ विकेटले पराजित !
काठमाडौँ । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको मंगलबारको खेलमा नेपाल ओमानसँग ५ विकेटले पराजित भएको छ । घरेलु टोली ओमानसँग टस जितेपछि पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले १९७ रनको लक्ष्य दिएकोमा ओमानले ११३ बल बाँकी छँदै लक्ष्य भेटाएको थियो ।
नेपालले ४७.४ ओभर खेल्दै १ सय ९६ रन बनाएर अल आउट भएको थियो । ओमानले यसका लागि ३१ ओभर १ बलमा सहजै जित निकाल्यो । ओमानले खेलमा ५ विकेट गुमायो ।
ओमानका लागि भने जतिन्दर सिंहले १ सय ७ रनको शतकीय इनिङ खेले । उनले ६२ बलमा ६ छक्का र १२ चौका प्रहार गर्दै यो योगफल तयार गरेका हुन् ।
उनले पाँचौ ओभरमा सोमपाल कामीको ओभरमा ३ चौका र ३ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
नेपालका लागि खेलमा आसिफ शेखले सर्वाधिक ९० रन बनाए । नेपालका लागि अन्य ब्याट्सम्यान खासै टिक्न सकेनन् । नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २१, रोहित पौडेलले २०, सन्दीप लामिछानेले १६ रन बनाए भने अन्तिम विकेटका रुपमा आउट भएका करण केसीले २१ रन बनाए । १ रन बनाएका सुशान भारी नटआउट रहे ।